Kenya 24 ruux u qabatay rabshado ka dhacay Mombasa iyo tirada dhimasho iyo dhaawac oo korortay – Radio Daljir
Oktoobar 5, 2013 1:57 b 0
Mombasa, October 5, 2013 – Xaalada magaalada xeebta ah ee Mombasa dalka Kenya ayaa weli kacsan oo waxaa laga cabsi qabaa in ay rabasho balaaran oo hor leh dhacaan, xili halkaas ay banaan-baxyo khasaare dhaliyey ka dheceen gelinkii dambe ee Jimcaha.
War-baahinta ayaa heshay xogta rasmiga ah ee khaasaraha ka dhashay rabashadihii Mombasa, waxaa la xaqiijiyey 4 ruux in ay dhinteen dhaawacna uu soo gaaray ilaa toban kale oo ka mid ah dhalinyaradii banaanka u soo baxday, booliska Kenya ayaa qabtay 24 ruux oo lala xiriirnayo kicinta rabshad wadayaasha.
Habeen hore ayaa magaalada Mombasa waxaa lagu dilay sheikh Ibraahim Ismaaciil oo caan ah ka ahaa magaalada, waana sanad kadib markii la dilay sheikh Cabuud Rogo oo ahaa wadaad aad looga tix-gelin jiray gobolka Cost ee dalka Kenya.
Rabshadaha ayaa salka ku hayey weerarka dilka sheikh Ibraahim Ismaaciil, waxaana inta badan dhigayey dhalinyaro muslimiin ah, ciidamada amaanka ayaa kala cayriyey iyadoo ay weli socdaan howl-galo amniga lagu xaqiijinayo.
Xaalada Mombasa waa mid kacsan sida ay qorayaan maanta wargays-yada Kenya, waxaa culimada diinta Islaamka ee gobolka Cost ay dilka ku eedeyeen ciidamada amaanka Kenya oo horey loola xiriiriyey dilkii sheikh Roogo ee sanadkii hore, balse dowladda ayaa iska fogaysay eedeymaya.
France oo taageeraysa booliska gudaha Burundi iyo howlaha meleteri ay ka wado dalka Soomaaliya